अष्ट्रेलियाको पाँच वर्षे अभिभावक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने ? - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको पाँच वर्षे अभिभावक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २५ आश्विन २०७३, मंगलवार ०३:१२ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलिया सरकारले आगामी वर्ष अर्थात सन् २०१७ को जुलाई १ देखि अभिभावकहरुलाई पाँच वर्षे भिसा उपलब्ध गराउँने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै धेरैले सुखद अनुभूति गरेका छन् ।
पारिवारिक मिलनका लागि अष्ट्रेलिया सरकारको यो निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको भन्दै सबैले स्वागत गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयपछि हजारौं डलर शुल्क तिरेर पनि झण्डै ३० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको छ ।
तर पाँच वर्षे भिसा पाउँनका लागि अभिभावकहरुले पनि निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि यी
१२ बूदा र शर्तनामाहरु पूरा गर्नुपर्दछ :
१.यो भिसा बढीमा पाँच वर्षका लागि मान्य रहनेछ :
अहिले अभिभावकहरुले आजीवनका लागि भिसा पाउँदै आएकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार दिइने अस्थायी अभिभावक भिसाको अवधि भने पाँच वर्षका लागि मात्र हुनेछ । अर्थात यो भिसा पाएका अभिभावकहरुले एकपटकमा पाँच वर्षसम्म मात्र अष्ट्रेलियामा बस्न पाउँछन् । यो भिसा एक वर्ष,तीन वर्ष र पाँच वर्षका लागि माग गर्न सक्नेछन् । छोरा छोरीको आर्थिक क्षमता,स्वास्थ्य अवस्था र अभिभावकहरुको उमेर अनुसार कति अवधिको भिसा उपलब्ध गराउँने भन्ने अधिकार अष्ट्रेलिया सरकारमा निहीत रहनेछ ।
२. पीआरका लागि आवेदन दिइरहन नपर्ने :
यो भिसा र पीआरबीच कुनै सम्बन्ध रहनेछैन । यो भिसाको अवधि मान्य रहेसम्म अभिभावकहरुले कानूनी रुपमा अष्ट्रेलियामा वैधानिक रुपमा बस्न पाउँनेछन् । तर यो भिसामा रहेका अभिभावकहरुले पीआरका लागि आवेदन दिन चाहेमा पनि कुनै रोकावाट भने हुने छैन ।
३.यो भिसा वाहकले स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा सेवा पाउँनेछैनन् :
यो भिसामा रहेका अभिभावकहरुले अष्ट्रेलिया सरकारबाट उपलब्ध गराउँदै आएको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँने छैनन् । यो भिसा अभिभावकहरुका अष्ट्रेलियामा रहेका छोराछोरीमै निर्भर रहने गरि डिजाइन गरिएकोले यसमा सरकारको कुनै दायित्व रहनेछैन ।
४ भिसा वाहकहरुले स्वास्थ्य विमा अनिवार्य गराउँनुपर्नेछ :
पाँच वर्षे अभिभावक भिसा लिएकाहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्नो स्वास्थ्य विमा गराउँनुपर्नेछ । यस्तो विमा निजी कम्पनीहरुबाट गराउँनुपर्नेछ,त्यही पनि अष्ट्रेलिया आउँनु अगाडि नै ।
५ छोरा छोरीले मात्र स्पोन्सर गर्न पाउँनेछन् :
यो भिसामा अष्ट्रेलिया आउँन चाहने अभिभावकहरुका छोरा वा छोरी अष्ट्रेलियामा वैधानिक हैसियतमा बसेको हुनुपर्नेछ । किनभने त्यस्ता छोरा छोरीले मात्र अभिभावकहरुका लागि स्पोन्सर गर्न पाउँनेछन् । किनभने छोराछोरीहरुको आर्थिक हैसियत र आम्दानी हेरेर मात्र यो भिसा दिइन्छ । त्यसैले आवेदन दिदा नै छोराछोरीले आफूले अभिभावकका सबै खर्च र आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने आधार पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
६ धरौटी रकम राख्नुपर्नेछ :
यस्ता भिसामा आएका अभिभावकका लागि अष्ट्रेलिया सरकार कुनै पनि दायित्व बोक्न तयार छैन । त्यसैले सबै खर्च छोराछोरीहरुले नै गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सरकारले सिभा दिनुभन्दा अघि नै केही रकम धरौटीमा राख्नसक्नेछ । केही गरेर स्वास्थ्य लगायतका लागि खर्च गर्न नसकेको अवस्था आए सरकारले यही धरौटी रकमबाट कटौति गरेर खर्च व्यहोरी दिनेछ ।
७ अँग्रेजी भाषा आवश्यक पर्नेछ :
त्यसो त अष्ट्रेलियामा पाँच वर्षे भिसामा आउने अभिभावकहरुलाई अँग्रेजी भाषाको दख्खलता आवश्यक पर्ने या नपर्ने भन्नेबारेमा अहिले छलफल भैरहेको छ । तर अष्ट्रेलियामा कामकाजीदेखि अन्तर संवादका लागि समेत अँग्रेजी भाषा आवश्यक पर्ने भएकोले अभिभावकहरुले पनि सामान्य अँग्रेजी परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने सम्भावना बलियो छ ।
८ काम गर्न पाउँने नपाउँने अनिश्चित :
यस्तो भिसामा अष्ट्रेलिया आउने अभिभावकहरुले काम गर्न पाउने या नपाउने भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । उमेर र स्वास्थ्य अवस्थामा निर्भर रहने भनिए पनि काम गर्न नपाउने सम्भावना बढी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
९ भिसा संख्या असीमित हुनेछन् :
शुरुमा वार्षिक ८ हजार अभिावकहरुलाई पाँच वर्षे भिसा दिने भनिएपनि छिट्टै यसलाई असीमित बनाउनेबारे पनि सरकरले छलफल शुरु गरेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेका सबै अभिभावकहरुले यो भिसा पाउनेछन् ।
१० उमेरको सीमा तोकिनेछ :
स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाका हिसावले अनावश्यक भार खेप्नुपर्छ कि भन्ने डर अष्ट्रेलियाको सरकारलाई छ । त्यसैले कुन उमेरका अभिभावकलाई दिने कुनलाई नदिने भन्ने अहिले प्रारम्भिक छलफलको क्रममै छ । तर कम उमेरका वा बढी उमेरका भए पनि अभिभावकहरुको महत्व र भावना समान हुने भएकोले यस्तो विभेद गर्न नहुने वहस पनि चलिरहेको छ ।
११ भने जस्तो सजिलो छैन :
मृत्यु सबैको अन्तिम बाटो वा सत्य हो । कसको मृत्यु कतिखेर हुन्छ भन्ने पनि यकिन हुँदैन । त्यसैले अष्ट्रेलिया आएका अभिभावकहरुभन्दा अघि उनीहरुलाई स्पोन्सर गरेका छोराछोरीको चाहिं अगाडि मृत्यु भयो भने के गर्ने ? भन्ने द्धिविधामा अहिले सरकार फसेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता अभिभावकहरलाई अष्ट्रेलियामै राखिरहने वा उनीहरुका देशमा फिर्ता पठाउँने ? भन्ने बारेमा छलफल भैरहेको छ ।
१२ आफ्नो कुरा राख्ने सबैलाई अधिकार छ :
सरकार अहिले पाँच वर्षे भिसालाई कसरी व्यवस्थित र सहज बनाउँने भन्ने गृहकार्यमै व्यस्त छ । त्यसैले यसबारेमा आफूलाई लागेका कुराहरु सुझाव र सल्लाहका रुपमा राख्न पाउँने सबैलाई समान अधिकार छ । यसरी सुझाव पठाउनेहरुको नाम र ठेगाना गोप्य राखिनेछ । सकरात्मक वा नकरात्मक जस्तोसुकै सुझाव पनि पठाउन सक्ने बताइएको छ ।
Previousमानसिक स्वास्थ्य समस्या के हो र किन लाग्छ ?
Nextआईसीसी महिला विश्वकपको एसियाली छनोटमा नेपालको पहिलो जीत
अष्ट्रेलियाले नोभेम्वरदेखि विदेशीहरुलाई उद्यमी भिसा दिने
२ भाद्र २०७३, बिहीबार ०२:३९
अष्ट्रेलियाको मेलबर्न शहर विद्यार्थीका लागि विश्वकै तेस्रो उत्कृष्ट शहर
२६ श्रावण २०७६, आईतवार ०७:४६
अष्ट्रेलियाका विभिन्न शहरमा नेपाली सुनकली देखाइदै
२९ भाद्र २०७३, बुधबार १६:०४
अष्ट्रेलियामा गर्मी बढ्यो,पौडिनु अघि यी कुराहरुमा विशेष ध्यान दिउँ
२ कार्तिक २०७६, शनिबार ०३:०४